Ifulethi elihle elinombono wolwandle imizuzu engama-50 ukusuka eSantiago
Corrubedo-Ribeira, Galicia, Spain
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTeresa
Igumbi elinomtsalane, elinombono wolwandle, elikwizibuko lelali encinci yokuloba, ejikelezwe ngamalwandle, eyona ikufutshane kumgama weemitha ezingama-40, kwaye ecaleni kweDunas de Corrubedo Natural Park. Ifakwe ngendlela ecocekileyo yale mihla Isakhiwo esinemigangatho emithathu, sakhiwe kakuhle, sizolile kwaye sizolile, iinkonzo zevenkile enkulu, iibhari kunye neendawo zokutyela zikufutshane kakhulu. Idityaniswe kakuhle kakhulu, imizuzu engama-50 ukusuka eSantiago, iyure eyi-1 ukusuka ePontevedra, 1h 20 imizuzu ukusuka eVigo kunye neyure eyi-1 imizuzu engama-30 ukusuka eLa Coruña.
Ifakwe kufutshane neDunar de Corrubedo Complex, ibhengezwe njengePaki yeNdalo. Malunga nemizuzu eli-15 ukusuka apho uya kufumana iCastro de Baroña, indawo yokuhlala yakudala ekwindawo entle. Ukutyelela okucetyiswayo kwi-Curota viewpoint, ibhengezwe iNdawo yeNdalo yoMdla weSizwe, apho unokubona khona ichweba lonke lase-Arousa kunye ne-Maritime-Terrestrial National Park ye-Atlantic Islands yaseGalicia kunye neziqithi zaseSálvora, i-Ons kunye ne-Cíes. Iindawo zokutyela ezilungileyo zokungcamla iintlanzi zaseGalician kunye nokutya kwaselwandle.
ICorrubedo yilali encinci yokuloba, ezolileyo kwaye eqaqambileyo. Ijikelezwe ngamalwandle amahle kunye nendalo. Sicebisa ukuba uthathe uhambo lokutshona kwelanga kwiPaka yeNdalo yeendunduma zeCorrubedo ukonwabela ivumba kunye nembonakalo-mhlaba ekhethekileyo. Kwaye kunjalo, incasa intlanzi yasekuhlaleni enencasa kunye nokutya kwaselwandle kuyo nayiphi na indawo yokutyela kule lali.
IPaki yeNdalo iqulathe i-1000 leehektare zendalo eyongezelelekileyo neendawo ezahlukeneyo zendalo; inkangeleko yendunduma emangalisayo enamanxweme eparadesi, amachibi kunye namachibi, kunye nezityalo ezinomdla okhethekileyo, kunye neentlobo ezihlala zihlala kwiGalician emntla-ntshona. Kukho iindlela ezininzi ezintle ezinokuthi zenziwe kwiPaki yeNdalo, kunye nakwidolophu ejikeleze idolophu.
Umbuki zindwendwe ngu- Teresa
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corrubedo-Ribeira